धेरै केटीहरूको लागि, शर्टहरू मनपर्ने गर्मीको लुगा हुन्। यो प्राकृतिक छ, किनभने तिनीहरू अत्यन्तै सहज छन्, हल्का र पूर्ण रूपमा दृष्टान्तको सम्मानलाई जोड दिन्छन्।
एक क्रसट को मालिकहरु को लागि, गर्मी को एक विशेष समय हो, किनकी तपाईं कपास वा रेशम धागे देखि airy azhur पहन सकते हो, उदाहरण को लागि, शर्ट्स (crochet)। योजनाहरु र मोडेलहरुको विवरण प्रतिष्ठित डिजाइनरहरु, र सरल गृहिणीहरु द्वारा विकसित गरिएको छ। यो अलमारी (शर्ट्स) क्लासिकलाई विचार गर्न सकिँदैन, किनकि यो धेरै सज्जन देखिन्छ। यद्यपि, मोडेलको सही संयोजनको साथ, एक ढाँचा र सामग्री, एक शिल्पकारले वास्तविक कृति प्राप्त गर्न सक्छ।
महिला शॉर्ट्स क्रोच: चार्ट र लोकप्रिय मोडेलहरूको वर्णन
किनकि यो गर्मीको सजावटी लुगा निर्माणको प्रश्न हो जुन केहि खुल्ला कार्य पैटर्नहरू विचार गर्न आवश्यक छ।
तल आरेख देखाउँछ, सायद, सबैभन्दा सामान्य ढाँचा, कहिले काँही हुक संग काम गर्न आविष्कार गरियो। यो "पाइनप्याप्स" हो। तिनीहरू राम्रो छन् कि तिनीहरू सजिलै परिवर्तन गर्न योग्य छन्।
उनीहरूको रैप्टरहरू बढ्न वा कम गर्न सकिन्छ। यसबाहेक, यस्तो योजना प्रयोग गरेर एक कुशल कर्मचारीले बिना अनावश्यक दुःख बिना आवश्यक फारमको विवरण बनाउँदछ। माथिल्लो तलबाट शर्ट्स क्रसहाट वा यसको विपरीत, तलबाट शीर्षमा। यदि एक बुनाई कपडा बनाउन निर्णय गरिन्छ, त्यसपछि गतिहरू तलबाट एकत्र गर्न सुरु हुन्छ (जहाँ बराबर बराबर बनाउन आवश्यक छ)।
ढाँचा शर्टहरूको विशेषताहरू
ती शिल्पकारहरू जसले कहिल्यै सिलाई सामना गर्नुभएन, उपाय हटाउन र शर्टको ढाँचा निर्माण गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
बुढो कपडाको लोचलाई विचार गरौं, यसलाई बुझ्न सकिन्छ कि भागहरु को आकृति अणुवादी हुनु पर्छ। शर्टहरूको पछाडि सधैं अगाडि भन्दा उच्च बनाइन्छ। पछाडि रोलिङ पनि उच्च बनाइएको छ, अन्यथा क्रक्टेड गरिएको शर्ट्स क्रोच गरिएको छ (ढाँचाको ढाँचा र विवरण फरक हुँदैन) यो संख्यामा बैठिन हुँदैन। प्रत्येक भाग को कम भाग को संकुचित गर्न को लागी यो वांछनीय छ, ताकि तैयार उत्पादन गक मा आराम हो। निस्सन्देह, त्यहाँ पनि कटौती भएका मोडेलहरू छन्, तर एउटा जोखिम हो कि शर्ट्स हिँड्नेमा धम्की दिनेछ।
म कसरी बेल्टमा राख्छु?
सामान्यतया क्रसट शर्ट गर्दछ (योजना र विवरण पुष्टि गरिएको छ) फास्टनरहरू बिना गर्नुहोस्, त्यसैले बेल्टले हिप्सको परिमाण भन्दा सानो हुन सक्दैन। उत्पादन तान्न र फिसल नगर्ने, क्रमशः बुना भयो फीता, साटन रिबन वा मुर्ती कोर्ड माथिल्लो किनारामा पास गर्छ।
यदि वांछित भएमा, तपाईं बुना भयो क्रोल्ड गरिएको शर्ट्सलाई एक लोचदार ब्यान्ड संग लैजान सक्नुहुन्छ। यस मोडेलका विवरणहरू र वर्णनहरूमा क्रसम वा क्रसेटको साथ धेरै पङ्क्ति स्तम्भहरू समावेश हुनेछन्। त्यसपछि उत्पादनहरू वास्तवमा व्यावहारिक हुनेछन्। बेल्टको सामनेबाट गमलाई देख्नदेखि रोक्न, एक अस्तरको कपडा कमरबण्डको तल पुर्याइएको छ। यी उद्देश्यका लागि कपासको लागि, सुत्न वा रेशम सामग्री राम्रो छ।
कसरी एक स्टेंसिल बनाउने निर्देशनहरू: सुझावहरू र सुझावहरू
फूलहरू वर्षभरि रातीको बारेमा बुझ्न: कागजबाट लिली कसरी बनाउने?
कसरी कुकुरका छोराछोरीको कपडा बुझाई: चार्ट र वर्णन
पाठ मोडलिंग। प्लास्टिकको खननबाट कसरी ढालना
HEALTHCENTER krasvye र नङ - जापानी मैनीक्योर
साराटोभ, त्रिएकको गिरजाघर: तस्बिर, सेवाहरूको समय तालिका, सञ्चालन, वर्णन, ठेगाना, फोन नम्बर घन्टा, इतिहास
चिकित्सा 'राहत' (मैनबत्ती)। निर्देशन
अभिनेता Bryus Dern: जीवनी, उत्कृष्ट फिल्म
रूसी र विपरित संग किबोर्डमा अंग्रेजी फन्ट स्विच गर्न कसरी
होटल "बेइजिङ" मिन्स्क मा: ठेगाना, फोन नम्बर, फोटो
Recumbent जुनिपर Nana: रोपण, हेरविचार, विशेष बढ्दै
लस, lactose र छेना जो खाद्य पदार्थ समावेश?